Tricks From Semalt Ahoana ny fandroahana Bota Bad
Ny fifamoivoizana Bot dia afaka mitarika ny angon-drakitra momba ny tatitra Google Analytics (GA), manakana ny fanatanterahana ny tranonkala, mampitombo ny vidin'ny fikojiana amin'ny tranokala ary mitarika ho amin'ny fiheverana diso. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mino fa tsy misy fiantraikany amin'ny tranokala ny varotra varotra. Na izany aza, ny fikarohana vao haingana dia maneho fa ny enimpolo isan-jaton'ny tranokala dia afaka mifandray amin'ny bots. Amin'izao lafiny izao, zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba fijerena ny fifamoivoizana bot manatitra marina tsara.
Anatin'ity lahatsoratr'i Lisa Mitchell, mpitantana ny Success Success of Semalt , dia manasongadina ny fomba fanao tsara indrindra azo ampiasaina mba hahitana ny fifamoivoizana amin'ny bot ao amin'ny Google Analytics (GA) ary koa ny fomba famonoana bots amin'ny ny fampiasana sivana sy teknika hafa voatonona. Ankoatr'izany, ny fomba fampiasan'ny indostria lehibe izay tsy maintsy arahina miaraka amin'ny filtres GA dia resahina.
Famantarana ny Bots
Ireto manaraka ireto dia hevitra manan-danja hijerena ny tatitra GA izay mifandray amin'ny botsika:
Faharetan'ny tendances isaky ny fivoriana.
Ny tahan'ny haingam-pandeha
Almost 100% traffic by new visitors
Filtration ny Bots
Eo ambanin'ilay sehatra "Admin", ny mpampiasa iray dia afaka manova ny fijerena "view" amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny boaty ho fanesorana ireo robots fantatra. Ireo manam-pahaizana amin'ny aterineto dia manoro hevitra fa ny mpampiasa dia tokony hanangana fomba fijery voalohany amin'ny voalohany mba hahitana ny vokatra voakasika alohan'ny fampiharana ny fomba fijery. Ny Bots / Spider ABC / IAB Iraisam-pirenena dia mamelatra ireo botsim-borona tsy misy amin'ny sehatra ho an'ny daholobe.
Ny fampiasana ny mpampiasa User sy ny adiresy IP
Asehoy ny fitifirana Bot
Maro ny fomba fanao indostrialy afaka arahina ivelan'ny GA, ohatra, ny tolotra CAPTCHA. Amin'ny maha orinasa iray azy, Google dia nampiditra serivisy vaovao ny CAPTCHA malaza antsoina hoe "No CAPTCHA." Ity serivisy ity dia afaka mamantatra ny fitondrantenan'olombelona, ​​toy ny fampiasana totozy ary mandray fanapahan-kevitra miorina amin'ny fihetsika toy izany. Ny fampidirana fehezanteny momba ny fanamarinana dia tsy ampiasaina amin'io sehatra io. Isaky ny mpampiasa iray mijery ny tranonkala voalohany, dia ny "Tsia CAPTCHA" dia aseho amin'ny mpampiasa. Ny tag Google Analytics (GA) dia tsy maintsy araraoty rehefa vita ny fahombiazan'ny serivisy CAPTCHA. Farany, ny seho cookie dia afaka apetraka aorian'ny fikarakarana, ary tokony esorina ny fifamoivoizana bot izay miditra amin'ny tranokala iray. Ny dingana manaraka dia azo apetraka amin'ny fanolorana taratasy fangatahana mailaka avy amin'ny mpampiasa mba handefasana ny rohy fampidirana ao anatin'ny 24 ora Source .